Aaladda Suuqgeynta Ugu Weyn Abid! | Martech Zone
Aaladda Suuqgeynta Ugu Weyn Abid!
Arbacada, Nofeembar 11, 2009 Talaado, Nofeembar 10, 2009 Adam Yar
Maya, ma daaha ka rogayo tikniyoolajiyad cusub oo cajiib ah, websaydh, ama xayeysiis kale oo qalin ah oo shirkaddaada gantaal ugu ridi doona xiddig weyn.
Waxan kahadlayaa adeegga macaamiisha weyn. Waxay umuuqataa mid cad in sidaa la leeyahay. Qof kastaa wuu ogyahay in adeegga macaamiisha ee weyn uu yahay hab la caddeeyey oo lagu kobcinayo meheraddaada, laakiin wixii aan ku arkay, shirkado badan ayaa ilaaway. Haddii aysan ilaawin, uguyaraan waxay luminayaan fursad ay ugu suurtageliyaan codadka macaamiishooda faraxsan inay kobciyaan ganacsigooda.
Qof kastaa wuxuu leeyahay sheeko naxdin leh oo ku saabsan adeegga macaamiisha qof walbana wuxuu leeyahay sheeko u gaar ah oo ku saabsan adeegga macaamiisha ee weyn. Suuqgeyaal ahaan, waxaan u baahannahay inaan xusuusnaano in sheekooyinkan maalin walba looga sheekeeyo macaamiisha mustaqbalka iyo macaamiisha. Oo hadda - warbaahinta bulshada ayaa sii xoojisay wada hadaladan!
Adeegga macaamiisha ayaa awood u leh inuu gooyo labada dariiqo. Sheekadaas xun waxay awood u leedahay inay u dirto rajo cusub iyo macaamiil jira tartamayaashaada. Sheekadaas weyn waxay keeni kartaa macaamiil cusub iyo iibsi kordhay. Waa shaqadaada inaad hagaajiso adeegga macaamiisha si aad u aamusiso kuwa xun, oo aad u siiso bullhorn si aad u weyneyso wanaagga!
Marka sideen ku hubin karnaa in sheekada la sheegayo? Muddooyinkii ugu dambeeyay, waxaan arkay habab qaali ah, oo wax ku ool ah oo lagu hubinayo in sheekada loo sheegay. Hal shirkad oo aan ogahay waxay macaamiisha u oggolaaneysaa inay wax ku qoraan oo ku dhajiyaan sheekooyinkooda barta shirkadda lana wadaagaan qof kasta oo diyaar u ah inuu wax akhriyo.
Shirkadaha qaar waxay bilaabeen shabakadaha macaamiisha Madal Ning. Waxay u adeegsanayaan shabakadahaan inay yihiin saldhig aqoon, madal, miis caawimaad iyo goob markhaatiyaal ah hal mar. Waa hab fiican oo lagu soo ururiyo khibrada macmiilka loona rinjiyeeyo sheekada dhabta ah ee adeegga macaamiisha weyn ee shirkaddaada.
Marka maxaad sameyneysaa si aad u hubiso in rajooyinkaagu maqlaan adeeggaaga macaamiisha weyn?
Nov 11, 2009 saacadu markay tahay 2:15 PM
Mahadsanid, Mahadsanid, Mahadsanid. Waxaan rumeysanahay in maroodiga qolka ku jira oo la wadaagayo tiknoolajiyada had iyo jeer ay noqoneyso inuusan iloobin dadka aad rabto inaad adeegsato tikniyoolajiyaddaada. Haddii aad iska ilowdo dadka markaa dhammaan tikniyoolajiyadda adduunka ugu weyn kama dhigi karto fikraddaadu mid faa'iido ama faa'iido leh.
Nov 14, 2009 saacadu markay tahay 7:40 PM
Julie, Mahadsanid! Waan oggolahay, tiknoolajiyada waxay u fiican tahay sida qofka isticmaalaya oo kale.
Nov 11, 2009 saacadu markay tahay 7:01 PM
Tan lama dhihi karo waa ku filan tahay. Haddana shirkadaha * wali * uma muuqdaan inay helayaan. Tani waa wax aan bilaabayno inaan ka hadalno waxyaabo badan oo ku saabsan boggeena, waxaanan si qoto dheer u qodeynaa sida saxda ah ee shirkadaha uga bixi karaan suuqgeynta warbaahinta bulshada illaa adeegga macaamiisha warbaahinta bulshada, laakiin waxaan weli u maleynayaa in tallaabada ugu horreysa ay tahay oo keliya xusuusinta shirkadaha adeegga macaamilku waa aaladda suuqgeynta ugu fiican halkaas.
Nov 12, 2009 saacadu markay tahay 2:07 PM
Waxaan ogaaday in shirkadaha runtii daneeya adeegga macaamiisha ay bilaabeen adeegsiga warbaahinta bulshada si wax ku ool ah. Laga soo bilaabo liistada goobaha dib u eegista ilaa ka jawaabista su'aalaha laga yaabo inay macaamiisha qabaan, iyo xitaa si guud u qirayaan cabashooyinka alaabta iyo xalkooda. Qirasho ahaan, waxaa jira waddo dheer oo loo maro ka hor intaanay faafsan.
Nov 12, 2009 saacadu markay tahay 11:00 PM
Aad buu u yidhi Aadam. Giraangirta dib looma cusbooneysiinaayo, kaliya waxaa loo sameysmay si loo fududeeyo dhaqaajinta. –Paul
Nov 14, 2009 saacadu markay tahay 7:38 PM
Nov 15, 2009 at 3: 04 AM
Adeegga macmiilku waa mid ka mid ah waxyaabaha had iyo jeer lagu qiimeeyo lagana qiimeeyo. Laakiin haddana waxaan jeclaan lahaa inaan arko iyagoo is rogrogaya. Haysashada sumcad adeeg macaamiil oo wanaagsan waxay siinaysaa shirkadaha markay siibanayaan. Laakiin waxay kasbadeen latitude-kaas.
Shirkadaha qaar waxay umuuqdaan inay kafiican yihiin adeega macaamiisha maxaa yeelay maheystaan ​​xakameyn toos ah. Si kastaba ha noqotee waad ku saxan tahay inaad dhahdo waa aaladda ugu weyn ee suuqgeynta abid, gaar ahaan markaad wax ku soo kordhiso ereyga-afka.
Jan 18, 2010 saacadu markay ahayd 6:46 PM
In kasta oo ay umuuqato inay muuqato inay habboon tahay inaad lahaato adeeg macmiil oo wanaagsan, haddana sida muuqata maahan, marka la qiimeeyo inta shirkadood ee runtii adeegga fiican haysta.
Tom - Xiriiriyayaasha Indhaha